ဇူလိုင် 2019 » Page2of9» ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
Month: ဇူလိုင် ၂၀၁၉
ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား အိန္ဒိယတပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဦးစီးချုပ်များကော်မတီ ဥက္ကဌက ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်းခင်းဧည့်ခံ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား အိန္ဒိယတပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဦးစီးချုပ်များကော်မတီ ဥက္ကဌက ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်းခင်းဧည့်ခံ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Ghaziabad မြို့ရှိ Bharat Electronics Limited (BEL)သို့ သွားရောက်လေ့လာ၊ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး Dr. Subrahmanyam Jaishankar နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နေပြည်တော်၊
ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ၊ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်၊ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား အိန္ဒိယတပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ၊ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်၊ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၉ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၀န်ကြီးချုပ်၏ အိမ်တော်၌ သွားရောက် ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား အိန္ဒိယတပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဦးစီးချုပ်များကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အိန္ဒိယလေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa က ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၉ အိန္ဒိယတပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဦးစီးချုပ်များကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အိန္ဒိယ လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၉
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နယူးဒေလီမြို့ရှိ သံရုံး၊ စစ်သံရုံး မိသားစုများနှင့် သင်တန်းသားများ အား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၉ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ညနေပိုင်းတွင် နယူးဒေလီမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့် တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မြန်မာစစ်သံရုံးတို့မှ မိသားစုများနှင့် ပညာတော်သင် သင်တန်းသားအရာရှိများအား မြန်မာသံရုံး၌
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၂)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ပါဠိတက္ကသိုလ် ညောင်တုန်းကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများနှင့်စေတနာရှင် ပြည်သူများက ဆွမ်းဆန်တော်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ဆေးနှင့် ဆွမ်းပဒေသာပင်အလှူငွေများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး(ရန်ကုန်)သို့ နဝကမ္မဘက်စုံ ပဒေသာပင်အလှူငွေများ နှင့် စားသောက် ဖွယ်ရာများလှူဒါန်း
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပေကျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ၊ သံရုံး၊ စစ်သံရုံးမိသားစုများအားတွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
Senior General Min Aung Hlaing receives Special Envoy for Asian Affairs of Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား ရုရှားတပ်မတော် ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ကိုယ်စား ဒုတိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်မှ ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ မှပြန်လည်ရောက်ရှိ (ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နေပြည်တော်၊ ဇေယျာသီရိ တပ်မတော်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော တပ်မတော်အားကစား ဆိုင်ရာအစည်းအဝေး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား(ရုပ်သံသတင်း)